Wholesale MTP Multimode 50/125 OM3/OM4 Optic Patch Cord Manufacturer and Supplier | Raisefiber
Fomba fibre: Multimode 50/125 OM3/OM4
Cable Savaivony: 3mm
Loko tariby: Orange na namboarina
Ny telegrama tapaka amin'ny MTP dia ampiasaina betsaka amin'ny tontolon'ny tariby avo lenta toy ny foibe data. Ny tariby nentim-paharazana sy voafehin'ny fibre maro be dia mila tapahan'ny teknisianina mahay tsirairay ny fibre tsirairay. Ny tariby MTP izay mitondra fibre maro dia tonga mialoha. Ny mpampitohy MTP tapaka amin'ny orinasa dia matetika manana fibre 8, fibre 12 na fibre 24.
MTP dia anarana marika novokarin'ny US Conec. Mifanaraka amin'ny specs MPO izany. MTP dia midika hoe "Multi-fiber Termination Push-on" connector. Ny connecteur MTP dia novolavolaina ho an'ny mari-pamantarana mekanika sy optika avo lenta. Ny sasany amin'ireo endri-javatra ireo dia voarakotry ny patanty. Raha ny maso miboridana dia misy fahasamihafana kely eo amin'ireo mpampitohy roa. Ao amin'ny cabling izy ireo dia mifanaraka amin'ny tsirairay.
Ny mpampitohy MTP dia mety ho lahy na vavy. Azonao atao ny milaza ny connector lahy amin'ny alàlan'ny tsimatra roa mipoitra avy amin'ny faran'ny ferrule. MTP vehivavy connectors dia hanana lavaka ao amin'ny ferrule hanaiky ny alignment tsimatra avy amin'ny lahy connector.
MTP Multimode 8 Fibres OM3 / OM4 50 / 125μm Fiber Optic Patch Cord, safidy lafo vidy amin'ny fampitsaharana ny saha mandany fotoana, dia natao ho an'ny fametahana fibre avo lenta amin'ny foibe data izay mila fitahirizana habaka ary mampihena ny olana amin'ny fitantanana tariby. Miaraka amin'ny mpampitohy MTP sy ny fibre Corning na fibre YOFC, dia natao ho an'ny 10/40 / 100G ambony angon-drakitra fampiharana foibe.
Connector MTP mankany MTP/LC/SC/FC/ST Isan'ny fibre 8, 12, 24
Fibre Mode OM3/OM4 50/125μm halavan'ny onjam 850/1300nm
Savaivony 3.0mm karazana poloney UPC na PC
Karazana lahy sy vavy Vehivavy na Lahy Karazana polarity Karazana A, Karazana B, Karazana C
Fatiantoka fampidirana ≤0.35dB Fatiantoka miverina ≥30dB
Cable jacket LSZH, PVC (OFNR), Plenum (OFNP) Loko tariby Orange, Mavo, Aqua, Volomparasy, Violet na namboarina
Isan'ny fibre 8Fibre / 12Fiber / 24Fiber / 36Fiber / 48Fiber / 72Fiber / 96Fiber / 144Fibre na namboarina
● Ampiasaina hampifandraisana fitaovana mampiasa connecteur MTP style sy OM3/OM4 50/125μm Multimode cabling
● Karazana A, Karazana B ary Karazana C dia misy safidy polarity
● Ny halavany sy ny lokon'ny tariby azo namboarina
● Natao ho an'ny rafitra 40Gig QSFP
Ny telegrama jumper dia ampiasaina amin'ny fampifandraisana farany avy amin'ny takelaka patch mankany amin'ny transceiver, na ampiasaina amin'ny fifandraisana lakroa afovoany ho fitaovana fampifandraisana ireo rohy roa tsy miankina. Ny tariby jumper dia misy amin'ny connecteur LC na connecteur MTP miankina amin'ny hoe serial na parallèle ny fotodrafitrasa. Amin'ny ankapobeny, ny tariby jumper dia fitambarana fohy lava satria mampifandray fitaovana roa ao anatin'ny fitoerana iray ihany izy ireo, saingy amin'ny tranga sasany dia mety ho lava kokoa ny tariby jumper, toy ny rafitra fizarana "eo afovoan'ny laharana" na "faran'ny laharana".
RAISEFIBER dia manamboatra tariby jumper izay natao ho an'ny tontolo "in-rack". Ny telegrama jumper dia kely kokoa sy malefaka kokoa noho ny fivoriambe mahazatra ary ny fifandraisana dia natao mba hamela ny hakitroky ny fonosana avo indrindra sy ny fidirana mora sy haingana. Ny tariby jumper rehetra dia misy fibre vita amin'ny fibre ho an'ny fampandehanana tsara amin'ny toe-javatra miondrika mafy, ary ny connecteurs dia misy loko ary fantatra amin'ny karazana fototra sy karazana fibre.
• Loko-kodiarana connector kiraro amin'ny fibre-count
• Savaivony tariby Ultra compact
• Miondrika fibre optimized sy ny fanorenana malefaka
• Misy amin'ny karazana Base-8, -12 na Base-24
• Fanorenana matanjaka
Karazana mpampitohy MTP
Safidy loko MTP® Connector
USCONEC MTP® loko
SM STANDARD MAITSO
SM ELITE tsinapy
OM4 ERICA VIOLET NA AQUA
MTP mankany MTP Multimode 12 Fibre OM3/OM4 Fibre Optic Patch Cord
MTP mankany MTP Multimode 24 Fibre OM3/OM4 Fibre Optic Patch Cord
MTP to MTP 12 Fibre Multimode OM3 Fibre Optic Patch Cord miaraka amin'ny Push/Pull Tabs
MTP to 6x LC Duplex 12 Fibre Multimode OM3/OM4 Breakout Fibre Optic Patch Cord
MTP mankany MTP Multimode 8 Fibre OM3/OM4 Fibre Optic Patch Cord
MTP mankany MTP 12 Fibre Multimode OM4 Fibre Optic Patch Cord miaraka amin'ny Push/Pull Tabs
Amin'ity polarity ity, ny fibre 1 (manga) dia tapaka amin'ny lavaka 1 amin'ny connecteur tsirairay sy ny sisa. Ity polarity ity dia matetika antsoina hoe STRAIGHT THROUGH.
Amin'ity polarity ity, ny fibra dia mivadika. Ny laharana fibre 1 (manga) dia tapitra amin'ny 1 sy 12, ny fibre 2 dia mifarana amin'ny 2 sy 11. Ity polarity ity dia matetika antsoina hoe CROSSOVER ary matetika ampiasaina amin'ny fampiharana 40G. Izany dia matetika ampiasaina amin'ny karazana B miaraka araka ny voalaza ao amin'ny fizarana manaraka.
Ao anatin'io polarity io, ny fibra dia mizara ho tsiroaroa 6 izay mivadika. Izy ireo dia natao hampiasaina amin'ny rafitra cabling prefab izay mifandray amin'ny breakouts (cable na modules) tsirairay 2-fibre fantsona.
MTP Type A Mating Adapters dia mampifandray ireo mpampitohy amin'ny fanalahidin'ny mpampitohy iray amin'ny lalana iray ary ny fanalahidin'ny iray hafa amin'ny lalana mifanohitra antsoina hoe KEYUP TO KEYDOWN. Ity fampifanarahana fanalahidy ity dia midika fa ny pin 1 amin'ny mpampitohy iray dia mifanandrify amin'ny pin 1 amin'ny mpampitohy hafa, manome fifandraisana mivantana ho an'ny fibre tsirairay - ohatra ny manga mankany manga, volomboasary mankany amin'ny voasary, hatrany amin'ny aqua mankany aqua. Midika izany fa ny kaody loko fibre dia tazonina amin'ny alàlan'ny fifandraisana.
MTP Type B Mating Adapters dia mampifanaraka ny fanalahidin'ny mpampitohy roa amin'ny lakile na KEYUP TO KEYUP ary asolo ny kaody lokon'ny fibra, mitovy amin'ny zava-mitranga amin'ny tariby Type B. Ilaina ny fanoloana fibre mba hampifanaraka ny fibre ho an'ny transceiver 40G.
Isan'ny fibre manokana
1. Nahoana no misafidy RAISEFIBER?
(1) Mpanamboatra matihanina: MOQ ambany, misy santionany maimaim-poana.
(2) Fanomezana antoka: kalitao avo lenta.
(3) Vahaolana mpanjifa: Haingana.
(4) Vidin'ny Win-Win: Mitahiry vola be, mitondra tombony bebe kokoa ho an'ny mpanjifa.
2. Manaiky OEM, ODM ve ianao?
Eny, manaiky azy ireo izahay.
3. Azonao atao ve ny manonta ny LOGO anay?
Azo antoka fa azo atao pirinty amin'ny boaty na vokatra ny LOGO anao.
4. Afaka manana baiko santionany amin'ity vokatra ity ve aho?
Eny, mandray santionany mba hitsapana sy hanamarina ny kalitao. Santionany mifangaro dia azo ekena.
5. Ahoana ny amin'ny fotoana hitarika?
Sample mila 1-2 andro, faobe ny fotoana famokarana mila 3-5 andro.
6. Ahoana no handefasanao ny entana ary hafiriana vao tonga?
Matetika izahay dia mandefa DHL, UPS, FedEx na TNT. Matetika 3-5 andro vao tonga. Ny fandefasana fiaramanidina sy an-dranomasina koa tsy azo atao.
7. Manome antoka ho an'ny vokatra ve ianao?
Eny, manome antoka 10 taona ho an'ny vokatra ofisialy izahay.
8. Ahoana ny amin'ny fotoana fanaterana?
1) Santionany: 1-2 andro.
teo aloha: MPO mankany MPO 12Fiber Multimode OM4 50/125 Ribbon Fibre Optical Patch Cord
Manaraka: MTP Multimode 50/125 OM5 Optic Patch Cord
MTP to 4x LC/UPC Duplex 8 Fibres Single Mode 9/...
MPO Single Mode OS1/OS2 9/125 Fibre Patch Cord
MTP to 2x 12 Fibres MTP 24 Fibres Multimode OM4...
MTP Single Mode OS1/OS2 9/125 Fibre Patch Cord